Ambaasaaddar Diinaa Muftii: ''Mooyyalee akka Dubaay gochuun fedhii biyyoota lamaaniiti'' - BBC News Afaan Oromoo
Ambaasaaddar Diinaa Muftii: ''Mooyyalee akka Dubaay gochuun fedhii biyyoota lamaaniiti''
8 Caamsa 2018
Image copyright Uhuru Kenyatta/FB
Goodayyaa suuraa Keeniyaafi Itoophiyaa daandii baaburaan walitti fiduuf waliigalaniiru
Ministirri muummee Dr. Abiy Ahimad daawwii isaanii Keeniyaatti taasisanin daandii baaburaa Keeniyaafi Itoophiyaa walitti fidu xumuruuf akka waligalan ibsameera.
Daandiin baaburaa kunis, Keeniyaa irraa magaalaa Isiyoloo hanga Finfinnee akkasumas Naayiroobii hanga Finfinnee kan walitti fidu akka ta'e pirezidantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa himaniiru.
Daawwannaa biyyoota ollaa
Ministirrii mummee Dr. Abiy Ahimad daawwannaa isaanii idil-addunyaa biyya ollaa Itiyoophiyaafi balbala daldala alaa kan taate Jibuutiirraa eegalani ergasii gara Sudaan kan imalan.
Mooyyalee Dubaay naannoo keenyaa gochuun fedhii biyyoota lamaaniiti,
Diinaa Muftii,, Keeniyaatti Ambaasaaddara Itoophiyaa
Guyyaa kaleessammoo Naayiroobiitti argamuun Pirezidant Uhuruu Keeniyaattaa waliin dhimmoota siyaas-diinagdee fi hawaasummaa irratti mari'atan jedhan Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Diinaa Muftii.
''Gaggeessitonni biyyoota lamaanii dhimma nagaafi tasgabbii irratti waliin hojjechuuf cimsanii waliigalaniiru,'' Jedhan.
Biyyoonni lamaan humna elektirikiin wal quunnamsiisuuf pirojektiin jalqabame akka xumuramu biyyotiin lamaan fedhii kan qaban ta'uufi kanammoo gara hojiitti jijjiiruuf waliigalaniiru.
Kunis, Keeniyaafi Itoophiyaa daandii baaburaan walqunnamsiisuu ilaallata. Kunis, faayidaan diinagdee argamsiisu olaanaadha jedhameera.
''Mooyyalee Dubaay naannoo keenyaa gochuun fedhii biyyoota lamaaniiti,'' jedhu Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Diinaa Muftii.
Xiinxaltoonni maal jedhu
Daawwannaan ministria muummee biyyootaa faayidaa siyaas-diinagadee olaanaa qabanitti taasisaa jiran bu'aa akkamii qaba jechuun ogeessota qorannoo diinagdee fi xiinxaltoota siyaasaa gaafanneerra.
Hayyuun diinagdee Doktar Asaffaa Adimaasee akka jedhanitti biyyoonni sadeen kun walitti dhufeenyi Itoophiyaa waliin qaban olaanaa waan ta'ef, imalli taasisanis hagasuma guddaadha.
Biyyoota Baha Afrikaarraa diinagdee guddaa qaban keessaa Keniyaa waliin walitti dhufeenyi taasifamu murteessaa ta'u kan himan Dr. Asaffaan, daangaa dheeraa qooddachuu isaaniifi walitti dhufeenyi isaaniis nagaa ta'u himu.
Mootummoota lamman gidduu daldalli taasifamu hammana ta'u baatus, gama ummatoota biyyoota lamaan gidduun garuu daldalli taasifamu guddaa waan ta'ef kana cimsuun akka barbaachisu himu.
Waligaltee buufata doonii Laamuu taasifamee kaasuunis Keeniyaan gama hedduun ollaa Itoophiyaa gaarii akka taate dubbatu.
Gama hidha laga Abbayyaan immoo walitti dhufeenyi Sudaan waliin taasifamu murteessaa akka ta'e kan himan Dr. Asaffaan, Jibuutin illee diinagdee Itoophiyaa keessatti gahee olaanaa qabdi jedhani amanu.
''Walumaa gala hireen Itoophiyaa gara fuulduraa gama siyaasaas ta'e gama diinagdee biyyoota ministirri muummee imala isaanii idil-addunyaan daawwatan waliin hidhata qaba.''
Haaluma walfakkaatun, ministirri muummee biyyota Lixaa badhaadhan dursuun biyyoota ollaa daawwachuun isaanii siyaasa gaanfa Afrikaa akka hubatan agarsiisa jedhu xinxalaan siyaasaa Bahaa Afrikaa Dr. Birhaanuu Leenjisoo.
Faayidaa siyaasaa fi diinagdee daawwannaa ministira muummeen isaaniif argamsiisu alatti biyyoota Sudaan fi Keeniyaatti hidhamtoota akka hiikaman inni taasifame hiika guddaa qaba jedhan.
''Daawwannaan ministira muummee taasisan milkaa'eera jedhamu kuni bulchiinsa siyaasaa biyya keessaa irratti illee fudhatama isaaniif argamsiisuu qaba.''
Ministira muummee Itoophiyaa: Uummata Amboo fuldura itti dubbataniiru